Ahịrị ngwaahịa: Kedu ihe ọ bụ, otu esi ahọrọ ya, ka esi agbasa ya | Ozi ECommerce
Ahịrị ngwaahịa: Kedu ihe ọ bụ, otu esi ahọrọ ya, ka esi agbasa ya
Ọ bụrụ na ị nwere eCommerce, ị maara na ị ga -ererịrị ngwaahịa dị iche iche iji nwee ike ịnye ndị ahịa gị ụdị dị iche iche. Agbanyeghị, ngwaahịa ndị a niile nwere ike yie ihe, dabere na ọnụ ahịa, ojiji, wdg. Nke a bụ ihe a na -akpọ ahịrị ngwaahịa.
Ma gịnị bụ ahịrị ngwaahịa a n'ezie? ¿Gịnị mere o ji dị ezigbo mkpa? Kedu agwa ha nwere? Enwere ike ịgbasa ma ọ bụ belata dabere na mkpa gị? Ọ bụrụ na ị nọ na -eche maka ya, ebe a anyị ga -egosi gị ihe n'isiokwu ka ị nwee echiche ka mma maka echiche a.
1 Gịnị bụ ahịrị ngwaahịa
1.1 Ahịrị ngwaahịa vs oke ngwaahịa
2 Otu esi ahọrọ ahịrị ngwaahịa
3 Otu esi agbasa ahịrị ngwaahịa
Gịnị bụ ahịrị ngwaahịa
A kọwapụtara ahịrị ngwaahịa dị ka otu ndị ụlọ ọrụ rere. Nke ahụ bụ, ha bụ ngwaahịa a na -ere ere, ma ọ bụ n'anụ ahụ ma ọ bụ n'ịntanetị.
Ngwaahịa ndị a na -emetụta ibe ha, ya bụ, ha nwere njirimara yiri ha n'etiti ha. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ọ bụla nwere onwe ya ma n'otu oge ahụ dị iche na ibe ya.
Ahịrị ngwaahịa vs oke ngwaahịa
Ọtụtụ na -agbagha ahịrị ngwaahịa na oke ngwaahịa. Agbanyeghị na ha yiri, ma nwee njirimara ụfọdụ yiri ma ọ bụ hara nhata, nke bụ eziokwu bụ na ha bụ okwu abụọ dị iche kpamkpam.
N'otu aka, ahịrị ngwaahịa bụ ngwaahịa nke nwere otu njiri mara na ụlọ ọrụ ndị ahụ na -enye ndị ahịa ha. Ụlọ ọrụ na -enyekwa ndị ahịa ha ụdị ngwaahịa dị iche iche mana, n'adịghị ka nke gara aga, na nke a, ha bụ ngwaahịa so na otu setịpụrụ.
Ka o dokwuo gị anya. Cheedị ihe deodorant. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ike nwee ọtụtụ ngwaahịa deodorant, ha niile ejikọtara na njirimara ha. Ma gịnị gbasara ụdị ngwaahịa a? Dịka ọmụmaatụ, nke a ga -abụ nhọrọ ngwaahịa ịdị ọcha.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ịsị na ahịrị ngwaahịa a bụ ndị agụnyere na ngalaba nke eCommerce ebe ngwaahịa nwere ike bụrụ isi edemede: nri, ngwaahịa ịdị ọcha, ngwaahịa na -akpachi anya, wdg.
N'ikpeazụ, ihe ọnụ ụlọ dị iche iche nwere ọtụtụ ngwaahịa ebe ọ bụ na ọ dabereghị na njirimara ụfọdụ, mana ọ bụ n'ozuzu ya (ọ bụghị dịka ọ dị n'ahịrị.
Kedu ụdị njirimara ahịrị ngwaahịa a nwere? N'etiti ha, anyị na -ekwu maka:
Ngwaahịa enyere n'ahịrị ngwaahịa yiri ibe ha nke ukwuu, na -enye site na imewe yiri ya na ọrụ ndị yiri ya.
Ha na -elekwasị anya n'otu ụdị ndị na -eri ihe.
Ọnụahịa ha nwere yiri nke ukwuu n'etiti ngwaahịa.
A na -ekesa nkesa site n'otu ọwa.
Ihe a niile bụ ihe dịkwa iche na ngwaahịa n'onwe ya.
Otu esi ahọrọ ahịrị ngwaahịa
Ị maara ihe akara ngwaahịa bụ. Ị maara ihe dị iche na ụdị ngwaahịa a makwa mara ụdị njiri mara ya. Mana, mgbe ị ga -amalite eCommerce, ma ọ bụ na ụlọ ahịa, mkpebi mbụ ị ga -eme bụ ịmara ihe ị ga -ere. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị ga -ere oke ma ọ bụ ahịrị ngwaahịa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị otu ihe ahụ ka ọ na -ere mkpagharị protein karịa ụdị ngwaahịa protein dị iche iche, ebe ọ gụnyere mkpagharị, yogọt ...
N'ezie, nhọrọ nke ahịrị ngwaahịa a na -ewere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ị kpebiri ụdị ngwaahịa ị ga -ere (yana mpaghara nke ị ga -anwa idozi). Ọ bụrụ na ị ga -ere ihe ụmụaka ji egwuri egwu, enwere ike nwee oke obosara, mana ị nwere ike họrọ ahịrị ngwaahịa ndị ahụ mgbe niile.
Kedu otu esi ahọrọ ya? Ị ghaghị ịdabere na ihe ndị a:
N'ịmara gị. Ọ bụghị otu ihe ahụ ịre ihe ị maghị, karịa ihe ị na -eme. Karịsịa n'ihi na ị na -enyekwu ntụkwasị obi site n'ime ka ndị ahịa hụ na ị nwara ya yana na -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma.
Arịrịọ. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụrụ na ịhọrọ ngwaahịa nke onye ọ bụla chọrọ, ị ga -enwe ohere ahịa karịa ma ọ bụrụ na ị nyefee onwe gị n'ahịrị ngwaahịa nke ọ nweghị onye chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ị ga -azụta vidiyo VHS? Ihe kacha ekwe omume bụ na mba. Mana ị gaghị ekwu otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọkpụkpọ DVD (ma ha abụọ agabigabeghị). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ: chọọ ire ngwaahịa achọrọ na nke achọrọ, yabụ ị ga -enwe ohere karịa.
Chọta arịrịọ ahụ. Ị kwesịrị ịhọrọ ngwaahịa na -amasị ndị ahịa n'ezie, nke na -adọta mmasị na nke na -eche na ọ bụrụ na ha enweghị, na ha abụghị ejiji ma ọ bụ na ha adịghị ka ndị ọzọ.
Otu esi agbasa ahịrị ngwaahịa
Ozugbo ị nwere ahịrị ngwaahịa ahụ, ọ gaghị amachi oke. Ọ bụ ezie na na mbụ a na -atụ aro ka ị ghara imebiga ihe ókè, ka oge na -aga ị nwere ike.
N'okwu a, enwere ike ịgbasa mgbasa ahụ n'akụkụ dị iche iche: elu (yana ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa dị elu), gbadaa (inye ngwaahịa dị ala na ọnụahịa dị ala) ma ọ bụ na abụọ (ngwaahịa dị elu na nke dị ala n'oge ahụ) .
Mgbe a bịara n'ịgbasa ahịrị ngwaahịa Ị ga -agbaso usoro nyocha nke dabere na ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ, nhọrọ ọ nwere, ndị na -ege ntị na ngwaahịa. na m nwere ike ịnwale.
Yabụ, tupu ị na -eche maka ịgbasa, ọ dị mkpa iche maka ma ọ ga -ekwe omume ma ọ bụ na ọ gaghị, ma ọ bụrụ na enwere ndị na -ege ntị maka ya, ma ọ bụrụ na ngwaahịa kwekọrọ na akara ụlọ ọrụ ahụ, yana ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume ịme mgbasa na ụlọ ọrụ (ebe inwe ahịrị ngwaahịa nwere ike ịpụta oke ibu ọrụ).
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka a nchọpụta gara aga iji mara ma ọ dị mma ịgbasa (Enwere oge mgbe ị na -emeghị atụmatụ mmeba ahụ n'oge adịghị mma), mee ya n'oge ahụ, wee jiri ya rụpụta ezigbo nsonaazụ.
Ugbu a ọ kọwaara gị nke ọma ahịrị ngwaahịa a, ọdịiche ya na oke yana otu esi agbasa ya, ị ga -amaja ime ya na eCommerce gị? Kedu ihe ị chere maka okwu a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịrị ngwaahịa: Kedu ihe ọ bụ, otu esi ahọrọ ya, ka esi agbasa ya
Obere ire ahịa: kedu ihe ọ bụ na gịnị ka ọ bụ?